Maamo Cusub iyo Taaloyinka 3 bilood ee ugu Horeey – Sixah Academy
Home / Uncategorized / Maamo Cusub iyo Taaloyinka 3 bilood ee ugu Horeey
Sixah Academy April 2, 2018	Uncategorized 2 Comments 2,912 Views
Maalmahan oo dhan baad dareemaysay daal daal iyo xanuun, cuntadi ba kaxidhan oo u urta wax kastaoo la kariyo ba kugu kicinaysa lalabo iyo matag. Waxaa u duumalaynaysa in aad uu rleedahay, pharmaciga kugudhawba ka soo qadatay pregnancy test; Mabrook! wa positive , Maamo baad noqonaysa ! .
Asxaabtada, Habaryarooyinka, Eedoyinka, Ayeeyda ,Qofwalbataalogaar ah buku so jeedin , ookhibra dooda hooyonimo ku salaysan .
Hadaba taaloyinka la so tijabiyayanfacoodamaxayyihin ?
Waxa laga yaaba in lagugu yidhi hooyo cusubb atahay , ha socsocon, meel ha aadin , shaqo ha qaban . Sabab? – Ilmahaka so dhacaya .
Hadaba aduunka oodhan waxa la iskuracay in maamadama alinkastaciyaarta exercise fudud 30 min, waxaykacaawisaxiligafoolshaislamarkana way ka yaraysa xanuunada sida macaanka iyo dhiigkarka .
Maamo kasta oo cusub waxa khasab ah in ay qadato folic acid and iron. Sababto ah waxay ka qayb qadata ilmaha ya rkoritankiisa iyo caafimadka hooyada. Markasta oo aad bilabaysid daawo cusub, dhakhtarkaga la tasho
Dhaktarkaga La xidhiidh
Waxyabaha ku caawinaya 9 biloodoo so socdawa in aad la xidhiidhid 1 dhakhtar oo kula socda bil kasta iyo waxyabaha kugu soo kor dhaama is bedeledaa addareentid. Ha sameeyn in aad marba dhakhtar duwan uutagtid waayo macluumad muhimuu ah xaaladada bamarkasta kamaqan dhakhtarkagacusub.
Markaa adoogat iduurkaga, week ga kuxiga dhakhtarkaga la xidhiidh.
Marxalaada 3 bilood oo ugu horeeya waa xiliga xubnaha ilmuhui intooda badan ay samaysmaan. Sigaarku wuxu khalkhalkurida samayska xubnahas. Ha ag fadhisaan qof sigaar cabaya ama qool xidhan oo sigaarl agucabayo, waayo qiiqa kugu baxayo wuxu kadaranyahay hadi adsigaarka toos uucabtid.
Maadada ku jirta shaaha, coffee, soda iyo chocolate, hadii hooyadu badsato waxa la ogaday in ay keenikartodhiciska. 1 glass ama 2 oo shah waa macquul lakininta in uuka badto iska ilaali
Dhabardhabar ha uuseexan
Bisha 3 markaaad so gaadhid ,waxa bilaabmaya in uu so muuqdo uurkago , Makan ku kor buuuga so marayla fihimiska ha hadi aad dhabrdhabar uuseexatida ma uu j iifsatid , waxaad culays saraysa xididka dhiigaga dhsiyaqaybbadanoo jidhkaga kamid ah . Dawa khadiyo wadnaha oo ku dhacaya baad dareemaysa hadi aad in badan uujiifsatid dhabardhabar.
3 bilood oo ugu horeeya xiliga uurka waxyabo badanba iska bedelaya jidhkaga ,dabeecadada iyo fahankaga , intaas oodhan waqaybka mid ah marxalada cusubuuga layjidhkagu . Uurkasta wuu ka duwanyahay kakahoreyaa makadanbeya, lakinta aloyinka caafimadaan uxagasareku so sheegnaymarna ma is bedelayan.
Waxaa nmaamo walba uu rajaynaya in ilahay uu fudeeydiyo uurka oo ilmo baari ah oo adiga iyo dadka isa iyo dalkiisaba ku wia nfacayilahay ha kadhigo . <3
Previous Joonis Cadka ( Hepatitis B )
Next Khatarta ay dawooyinku ku yeelan karaan ilmaha uurku jiifka ah